Ihe niile gbasara GPS na akụrụngwa - Geofumadas
Isiokwu OF ọdịnaya
All banyere GPS na akụrụngwa
Peeji a bu nchikota edemede nke isiokwu di na saiti a banyere GPS na akụrụngwa. O nweghi mmelite kachasị ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ihe ị na-achọ, ịnwere ike ịlele ọhụụ kachasị ọhụrụ na edemede ma ọ bụ mkpado ndị a:
Gaa na Index
GPS Mobile Mobile, Nkwa na ndị ọzọ
Ihe dị ọhụrụ na MobileMapper Field na MobileMapper Office
Akwụkwọ ntuziaka nke MobileMapper na Nkwa na Spanish
Onyonyo Mobile 10, echiche mbụ
Lee anya na 100 Mobile Mapper
Inwale Promark3 ... naanị foto
Version Iche MobileMapper Office na MobileMapper Office 6
The GPS Promark 3, mbụ echiche
Maapụ Mobile Mobile GPS 6, data nhazi data
Ebe ịzụta GPS
MobileMapper 6, nke mbụ
Ngwado nke software GIS maka nyocha
Nchịkọta Ntụkọ 60 Nanị Ntọala
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu
Mepụta akwụkwọ na CAD CAD site na Data Data Station
Ihe omumu nke onu ogugu na onu ogugu
Ntuziaka iji GPS na ngụkọta Leica
Anyị na-ejide ọdụ ụgbọ ologo zuru ezu?
Ule Ngwunye Skiakia SET 630RK
Akwụkwọ ntuziaka na ọmụmụ ihe
Ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe
Ahịa zụrụ Ashtech; kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya
AKWỤKWỌ NDỊ MGBE AKA
Mgbasa ozi nke ndị ukwu nke Geo
Nhazi data na ngwaọrụ CAD / GIS
GPS Beel, ihe kasị mma iji rụọ data
TopoCAD, karịa Topo, karịa CAD
Jiri na ngwa
Obodo cadastre, nke usoro a kwesịrị ekwesị
Dee ntanetị na Google Maps
Gbanwee data dabere na nchọpụta zuru oke
Ịgba n 'ohi nke ngwá ọrụ nyocha
GPS na ngwa mkpanaka
GPS dị ka ígwè olu na ụzọ mgbapụ
Ịwụnye gvSIG Mobile
Map GPS nke Venezuela, Peru, Colombia na Central America
Isiokwu ndị ọzọ na-akpọ GPS na akụrụngwa
Kasị mma Zonum maka CAD / GIS
6 Geoinformatics, ọtụtụ maka ndị nyocha
Otu akụkọ, ugbu a na GPS
13 Na-aza "Ihe niile gbasara GPS na akụrụngwa"
Amaury kwuru, sị:
M na-aghọta ọnọdụ gị, mgbe ọdịdị ala bụ nnọọ jupụtara na nkume na-eme nke a na-ata na ọnọdụ, ị na-ekwu na ọ bụ a rektangulu na Ebe a CORS na onye ọ bụla vertex, anyị kwesịrị anya ụfọdụ ndị ọzọ teren atụmatụ inye otu echiche, ma m ga-enye m mgbe ele ihe anya na-ahụ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-enyere aka, otu CORS na ebe kasị na ebe n'etiti nwere ike ịbụ na-ezu, ebe ọ bụ na 20 km bụ obere anya ka a GNSS ngwá na tinye repeaters putara ighe dịrịkwa n'ebe kasị elu na-agbalị ikpuchi ebe ebe enweghị mkpuchi. Iji-uru nke ihe ị na-ama nwere, ọ ga-adị mma ịmata ma ọ bụrụ na site ohere na mobile Internet akụkọ n'ebe ụfọdụ, ikekwe nwere ike mejuputa a NTRIP + RADIO Nchikota. Ihe ọ bụla m na - ahapụ mail m, info@acnovo.com
kwụsị kwuru, sị:
nwere ndika ebe 30000 hectare akpụ a rektangulu nke 20000 m 15000 m kwa n'akụkụ, na vertices nwere ERP NET R9 Trimble (ERP, adịgide Ndepụta Station) na ọ pụtara 1 ERP, esịtidem ọdịdị ala nke rektangulu bụ nanị nkume (ezuru ugwu nta), ọnọdụ a na-eme ka GPS na-arụ ọrụ na rover RTK trimble R10 mgbaàmà na-efu, ọ na-eche ebe GPS mgbaàmà repeater redio. ajụjụ a bụ ihe kachasị mma iji nwee ike ịme nyocha na RTK, njikọ nke redio na usoro ma ọ bụ n'otu.
Jose Salas kwuru, sị:
Hi! Agbalịrị m ịdebe onyinyo ihe oyiyi na mkpokọta GPS GR5 GPS na enweghị m ike iji anya nke uche hụ ya. Kedu ihe m kwesịrị ime?
TATA kwuru, sị:
Ndewo onye ọ bụla, Enwere m 120 gps ashtech. M na-arapara na ihuenyo ihe nkiri na mmalite, e nwere ụzọ m ga-esi dozie ya ma ọ bụ dozie ya
ALEJSN kwuru, sị:
June, 2014 na
Enrique kwuru, sị:
October, 2013 na
Hi Guys Achọrọ m ịma otú m nwere ike isi mee ma ọ bụ ihe ngwọta maka obere nsogbu a.
Enwere m GPSMAP 62 SC. Emere m nyocha na isi ihe na foto nke ụfọdụ àkwà mmiri na ụzọ okporo ụzọ ma ugbu a enweghị m ike ibudata foto ma ọ bụ ihe ọ bụla, olee otu m ga - esi mee ma ọ bụ ihe mmemme a ga - eji maka nke a, foto nwere ndị na - ahazi anaghị apụta iji nwee ike iwere ya google eart ma ọ bụrụ enwere m ike ịtụ anya na ị ga - enyere m aka ikele gị nke ukwuu.
Cesare Dantonio kwuru, sị:
September, 2013 na
na iwu nke onye na - ekwu na faịlụ ndị ahụ .sp3 (ezigbo esfemeris) nwere ike zigara Rinex site na BERNESE software. AJỤJỤ A NA-EKWU? ma ọ bụrụ na o kwere omume site na ebe m budata ngwanrọ ahụ. M abanye na peeji nke uzo bụ njikọ:
http://www.bernese.unibe.ch/ Otú ọ dị, achọtabeghị m onye nhazi ahụ. Onye nwere ike inyere m aka ịkọwa ma ọ bụrụ na nke a ga-ekwe omume ma ọ bụ na ọ bụghị.- N'ỤLỌ ANYỊ NA-ECHERE GỊ KWESỊRỊ.
Guillermo Correa Arias kwuru, sị:
August, 2013 na
Enwere m ike izipu catalago.
July, 2012 na
Hi Diego, Amaghị m EPOCH iji nye gị ndụmọdụ.
Fausto, lelee ubochi komputa gi na komputa gi. Agaghị m enye gị nsogbu. Kedu ụdị sọftụwia ị na-eji?
Fausto Chicas kwuru, sị:
M mkpa ịmata ihe na-eme na software MSTAR potsproceso Magellan Promark X ụbọchị na ike ime ka ọ na-arụ ọrụ na-enye m njehie ụbọchị Almanac ndị ugbu a na-eji nke a software nke mere na m nwere ike ịkọwa ihe na-eme mkpa enyemaka.
Diego Rivera kwuru, sị:
M ga-achọ ka otu echiche banyere L1 Epoch GPS maka topographic n'ibuli 10 ezi ziri ezi na tụnyere Mobile Mapper 10. Daalụ
Ha bụ ezigbo ndị otu, ya na ọghọm nke ị na-anaghị enweta nkwado maka oge ị na-emebi ihe. Ọ dabere na obodo ebe ibi, mana n'ozuzu na Latin America, ha nwere ọkwá dị ala dabere na Sokkia, Leica na Topcon
BERNARDO kwuru, sị:
Ndewo ezigbo, m si Argentina na achọrọ m ịma ihe echiche ụdị nkume na ndịda ndịda kwesịrị maka ụlọ ọrụ niile. N'ebe a amachaghị ha nke ọma, yabụ, m ga-achọ ịmara, ọ bụrụ na ha nwalere ha, ihe nsonaazụ ọ nyere ha ... ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịnwe echiche nke onye nwerelarị ahụmịhe na-arụ ọrụ na ụdị ndị a.
Ana m ekele gị nke ukwuu.